Manohy Mitokona Tsy Mihinan-kanina Ilay Mpanao Gazety Makedoniana Noho Ny Fanemorana Ny Fotoam-pitsarana Azy · Global Voices teny Malagasy
Manohy Mitokona Tsy Mihinan-kanina Ilay Mpanao Gazety Makedoniana Noho Ny Fanemorana Ny Fotoam-pitsarana Azy
Voadika ny 07 Oktobra 2016 6:28 GMT
Valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notontosain'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Makedonia sy ny Federasiona Iraisampirenena ho an'ny Mpanao Gazety, manambara momba ny fitokonana tsy hihinan-kanina ataon'i Božinovski. Sary avy amin'ny AJM, nahazoana alalana.
Nitokona tsy nihinan-kanina nanomboka tamin'ny 14 Septambra ilay Makedoniana mpanao gazety Zoran Božinovski, izay mbola miandry fitsarana noho ny fiampangana azy ho manao fitsikilovana. Nogadraina vonjimaika efa ho dimy volana mahery izy.
Mitantana tranonkala vavahadin-tserasera amin'ny endrika vaovao mpanaitaitra Burevesnik.org, malaza amin'ny famoahana vaovao tafaporitsaka maha-voarohirohy ireo mpikambana malaza ao amin'ny sangany ara-politika Makedoniana amin'ny fanao ratsy isan-karazany i Božinovski. Tamin'ny 2012, nanomboka raharaham-pitsarana nomena anarana hoe “Mitsikilo” ( “Шпион” amin'ny teny Makedoniana) ny governemanta Makedoniana izay miampanga olona 20 ho mitsikilo ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, Gresy sy Hongria (kandidà ho mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana i Makedonia), anisan'ireo olona ireo i Božinovski sy ireo mpitsikera ny governemanta ary ireo mpanao ampamoaka.
Fantatra fa efa nomelohin'ny Fitsarana Heloka Bevava ny ankamaroan'ireo voarohirohy amin'ity tranga ity ary miandry fanapahan-kevitra avy amin'ny Fitsarana Ambony ny raharahan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Na dia izany aza, satria nonina tany ivelany i Božinovski tamin'izany fotoana, nisy ny fotoam-pitsarana mitokana natao ho azy tao amin'ny Fitsarana Heloka Bevava.
Nosamborina sy nogadraina noho ny didy fampisamboran'ny Interpol (Fikambanana Iraisam-pirenen'ny Polisy misahana ny heloka bevava) tamin'ny 2013 tany Serbia i Božinovski, saingy navotsotra afaka 300 andro rehefa nangataka ny fampodiana azy an-tanindrazana ny manampahefana Makedoniana. Nampodiana tany Makedonia ihany izy tamin'ny Aprily 2016.
Nikarakara fihetsiketsehana [mg] ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Makedonia (AJM) sy ny Sendikan'ny mpanao gazety, mitaky famotsorana tsy misy hatak'andro ho an'i Božinovski. Naneho fanairana manoloana ny fanemorana ny fotoam-pitsarana ny raharahan'i Božinovski ny AJM. Tamin'ny fanambarana vao haingana, nampitandrina ny AJM fa “manitsakitsaka ny zony hahazo fitsarana ara-drariny ny fitsarana.”
Nitokona tsy nihinan-kanina nandritra ny roa herinandro ilay mpanao gazety Bozinovski, mitaky ny fanatsaharana ny fanagadrana azy, nahemotry ny fitsarana fanindroany androany ny fitsarana azy noho ny “anton-javatra manokana sy ara-pianakavian'ny mpitsara Sandra Krstic”.
Noho ny fandavana hatrany ny famotsorana an'i Bozinovski, manao tombo sy hala ny fitsarana. Tsy manery ny fanagadrana ny manampahefam-panjakana teo aloha ahiahiana ho nanao heloka bevava goavana ny fitsarana, nefa tsy misy antony ara-dalàna tokony hihazonana ilay mpanao gazety efa ho enimbolana. Noho izany, tsy midika fa fitohizam-potoam-pitsarana ny fanagadrana, fa lasa sazy kosa.
Tamin'ny 23 Septambra, nanambara ny filohan'ny AJM, Naser Selmani fa nanomboka nitokona tsy hihinan-kanina i Zoran Božinovski tamin'ny 14 Septambra, noho ny fanitarana tsy ara-drariny ny fanagadrana vonjimaika azy sy ny fanemorana ny fotoam-pitsarana azy. Nanambara ny AJM fa tsy nampandre ny mpisolovavan'i Božinovski na ny Mpanelanelana mikasika ny fitokonany tsy hihinan-kanina ny manampahefan'ny fonja sy ny fitsarana, “miaraka amin'ny fikasana miharihary hanafina ity vaovao ity amin'ny vahoaka.”
Misy ihany koa ny tahotra miely sy azo itokisana fa mety miaina fampijaliana mafy any am-ponja i Božinovski. Nanambara momba ireo mpanao politika ambony toa mandrahona hampijaly an'i Božinovski ny resaka nohainoina tafaporitsaka navoakan'ny mpanohitra ara-politika ao Makedonia tamin'ny 2015. Tamin'ny resaka teo amin'i Martin Protuger, lehilahy tanana ankavanan'ny Praiminisitr'i Madedonia Nikola Gruevski tamin'izany fotoana, sy ny Minisitry ny Atitany Gordana Jankuloska tamin'izany fotoana ihany koa, niresaka momba ny fomba hanatontosana ny fampijaliana azy rehefa any an-tranomaizina izy roalahy ireo. Mangataka hitsidika azy i Protuger “miaraka amin'ny fakan-tsary CCTV [fanarahamaso] tsy mandeha tamin'izany fotoana izany.” Niresaka momba ny hisian'ny fanolanana azy ataon'ny voafonja hafa ho toy ny zavatra “mitranga tsy mila lazaina” ihany koa izy ireo.
Tamin'ny 22 Septambra, nitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro ho an'ilay mpanao gazety ny Federasiona Eoropeanan'ny Mpanao Gazety. Nitatitra ny Sekretera Jeneralin'ny EFJ, Ricardo Gutiérrez fa tsy noraharahian'ny fitsarana ny fangatahana ofisialin'izy ireo mba hamela azy ireo hitsidika an'i Božinovski any am-ponja:
Nanasonia ny Fehin-kevitry ny Vaomiera Eoropeana momba ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety sy ny fiarovana ny mpanao gazety ny governemanta Makedoniana tamin'ny 13 Avrily. Ny fanontaniako ankehitriny ho an'ny governemanta dia: Inona no nataonareo hatreto mba hampihatra ny fehin-kevitra nosoniavinareo tamin'ny Aprily? Inona no nataonareo hiantohana ny fahaleovantenan'ny haino aman-jery sy hiarovana ny fahamaroan-kevitry ny haino aman-jery? Inona no nataonareo hiarovana ny loharanom-baovaon'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao ampamoaka? Inona no nataonareo mba hisorohana ny fanagadrana tsy ara-dalàna atao amin'ireo mpanao gazety? Inona no nataonareo hampitsaharana ny kolontsain'ny tsimatimanota amin'ny famelezana mpanao gazety? Firy ireo famotorana nataonareo? Firy ny fitoriana? Firy ny olona tompon'andraikitra amin'ny heloka tahaka izany no efa noentina teo anatrehan'ny fitsarana ary voaheloka?
Tsy tena niteraka sahotaka teo amin'ny vahoaka Makedoniana izany vaovao izany, satria eo ambanin'ny fifehezan'ny antokon'ny fitondrana mivantana ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Na izany aza, naneho hevitra momba ity tsy fiovan'ny toe-javatra fahatomombanan'ny andrimpajakana ity ny sasany tamin'ireo mpisera media sosialy.
Atao ao anatin'ny 3 andro ny fitsarana an'ilay gadra Z.Bozinovski. Mbola tsy nahazo porofo avy amin'ny fitsarana ny mpisolovava azy
Mitokona tsy hihinan-kanina i Zoran Božinovski. Afaka mino izany ve ianao, nangataka ny mpitsara mba hahemotra ny fotoam-pitsarana azy. TSY EFA NILAZA VE AHO FA MITOKONA TSY MIHINAN-KANINA IZY?
Niantso ny Fitsarana Ambony ao Skopje ny AJM mba handefa avy hatrany ny fanapahan-kevitra momba ny raharaha “Mitsikilo” any amin'ny Fitsarana Heloka Bevava, izay ahafahan'ny mpisolovavan'i Božinovski hahazo porofo sy hanomana ny fiarovana azy. Ho fanakanana izany, nilaza izy ireo fa hisy hatrany ny fanemorana ary hiha-mino ny vahoaka fa misy “ambadika ara-politika” ny raharaha.